Umenza njani umfazi athandane nawe ▷ ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Indlela yokwenza umfazi athandane nawe. Kuthiwa imeko yentabatheko yenye yezona zihlandlo zolonwabo ebomini bethu. Ukuthandana nomntu obhinqileyo kunzima kakhulu, kwaye ukufezekisa oko kufuneka ukhuphe zonke izixhobo zakho. Kodwa unako ukwaliwa nguye, kwaye ukuthintela oku kungenzeki, siye sadala eli nqaku kunye neengcebiso ezisisiseko kumfazi wamaphupha akho ukuze abone isiqingatha sakhe esingcono. Umnqweno omhle!
1 Indlela yokwenza umfazi ukuba akuthande inyathelo ngesinyathelo
1.1 1. Yimamele
1.2 2. Yiba yindoda
1.3 3. Nxiba kakuhle ukwenza umfazi akuthande
1.4 4 Musa ukuqhayisa;
1.5 5. Musa ukuyihoya
1.6 6. Mtsalele umnxeba emva komhla wokuqala ukuba athandane nawe
1.7 7. Hamba kancinci
1.8 8. Yiba nobubele kubahlobo bakho
1.9 9. Khokela ubudlelwane bakho
1.10 10. Yiba nothando ukuze umfazi athandane nawe
1.11 11. Yazise kusapho lwakho
Indlela yokwenza umfazi ukuba akuthande inyathelo ngesinyathelo
Akukho mfazi ufana nomnye, kwaye yiyo loo nto amadoda amaninzi esoyika xa ecela umhla. Abazi ukuba benze njani, ukuba lo mfazi unokuyithanda kwaye bacinga ukuba abayi kukwazi ukuyiphumeza.
Okulandelayo siza kukunika iingcebiso ezisisiseko eziya kukunceda ufezekise injongo yakho fumana umfazi ukuthandana nawe.
Bonke abafazi bayathanda ukuthetha nokuviwa. Ngomhla wokuqala unokuthetha ngezihloko ezingenakubalwa, kwaye ukuba ufuna ukumenza azive ekhethekileyo, nikela ingqalelo kuyo yonke into akuxelela yona kwaye uthethe naye. Esi sisiqalo esihle kwaye siya kukuqhagamshelanisa ngokutshintshiselana ngezimvo.
2. Yiba yindoda
Xa sithetha ngokuba yinene akuthethi ukuba kufuneka ube yinkosana enomtsalane. Ukuze ube yinene unetyala njeziphathe ngendlela echubekileyo, enobulali, nangolwazelelelo. Ngokomzekelo, vula ucango lwevenkile yokutyela okanye lwenqwelo-mafutha ukuze adlule yaye ungasebenzisi amabinzana angcolileyo ebudeni bomhla. Kwakhona, ungaze ucinge ngokwenza inkanuko yesini njengoko bekuya kuba yinto engekhoyo kwaye yenze imeko-bume enzima. Niyaqhelana, anisosibini.
3. Nxiba kakuhle ukwenza umfazi akuthande
Akukho mfazi uza kucinga ukuba indoda ebomini bakhe luhlobo olunxiba impahla emdaka nenuka kakubi. Amadoda achetywe kakuhle okanye aneendevu ezilungiswe kakuhle, enevumba elimnandi, aneenwele ezicocekileyo kunye neempahla ezigqamayo ngenxa yokuthozama kwazo ziinkcukacha ezifumana amanqaku amaninzi okubona kumfazi omthandayo.
4 Musa ukuqhayisa;
Kukho amadoda athanda ukuqhayisa ngemisebenzi yawo okanye izinto eziphathekayo, kodwa oku Asiyonto ofanele uyenze phambi komfazi ojonge ukuloyisa. Yaye akafuni ukuba uthethe ngezinto ongenazo, ekubeni nakweyiphi na imeko akuyi kukwazi ukumchukumisa.
5. Musa ukuyihoya
Ukuba ufumene umfazi ogqibeleleyo kwaye ufuna ukuba athandane nawe, kufuneka uyifake kwincoko nabahlobo bakho. Zama ukuthetha ngezihloko anomdla kuzo naye, kwaye umvumele avakalise uluvo lwakhe. Ukuthetha ngeemoto, ibhola ekhatywayo, kunye nabanye abafazi ngokuqinisekileyo ngaphandle kombuzo. Qinisekisa ukuba abahlobo bakho nabo bayayazi indlela yokuzigcina bazolile kwaye banezihloko ezahlukeneyo zokuthetha ngazo.
6. Mtsalele umnxeba emva komhla wokuqala ukuba athandane nawe
Ukuba umbiza ngosuku emva komhla wakho wokuqala, amathuba okuba athandane nawe anda kakhulu. Musa ukudlala isiphazamiso, akunamsebenzi. Into ekufuneka uyenzile kukumfowunela ukuze ubone ukuba unjani, umxelele ukuba ukuthandile ukudibana naye kwaye ufuna ukumbona kwakhona. Ukuba ngokwenene ufuna ukukwazi ngakumbi, uya kusamkela isimemo. Musa ukumgqithisa de kufike umhla wesibini kunye newaka lemiyalezo ngefowuni, inethiwekhi yoluntu okanye i-imeyile.
7. Hamba kancinci
Uninzi lwamadoda lunethemba lokuba emva komhla wokuqala, kuya kwenzeka into esondeleyo. Kodwa ulwalamano olusondeleyo lufuna ixesha, intlonelo, imbopheleleko nokuzinikela. Mhloniphe ngaphezu kwayo yonke enye into. Indoda ekuthathela ingqalelo oku, iyasihlonela isigqibo kunye nexesha elicetywa ngomnye umntu.
8. Yiba nobubele kubahlobo bakho
Ukwazi isangqa sakho abahlobo phantse isiko, kwaye kulapho uya kufumana imvume okanye ukungamkelwa kubo. Oku kubaluleke kakhulu kuye, ngoko yiba nembeko kwaye ube nobuhlobo. Thetha nabo ungoyiki ukuba ungubani kanye kanye. Ekugqibeleni, ukubeka elubala kangangoko kunokwenzeka yinto elungileyo kuwe.
9. Khokela ubudlelwane bakho
Xa uthatha isigqibo sokuba kunye nomfazi, Kufuneka ucace malunga nento oyilindeleyo kubudlelwane. Ukuba awuboni ikamva kunye naye, phelisa ukubandakanyeka kwakho, kodwa ungabi naye ngenxa yentlungu okanye intuthuzelo. Ukuba, kwelinye icala, ufuna ibe yeyakho ngonaphakade, tshata. Kulula ngolo hlobo. Abasetyhini bayathanda ukwazi apho banyathela khona.
10. Yiba nothando ukuze umfazi athandane nawe
Ukuba nothando asikokuba netshizi. I-Romanticism yiyo umxube wezenzo ze-chivalrous, njengokuhlawula ityala lokutyela, kunye nezinto ezothusayo ezincinci ezinokusukela ekumnikeni intyatyambo ngaphandle kwesizathu sokumazisa kwabanye njengentombi yakho (ukuba uyiyo ngokwenene).
11. Yazise kusapho lwakho
Ukwazisa umfazi omthandayo kusapho lwakho kufana nokutywina idinga. Ke ukuba uqinisekile ukuba ngumfazi wobomi bakho, hamba. Akuyomfuneko ukulungiselela isidlo sasemini esisesikweni okanye isidlo sangokuhlwa ukuze wonke umntu azane. Kuphela yinxibe njengeqabane lakho kwindibano yosapho okanye itheko. Kukhululekile ngakumbi kwaye awuyi kuziva ungakhuselekanga malunga nokudibana nomntu wonke. Kodwa khumbula ukuba ungamshiyi yedwa nangaliphi na ixesha.
Ukuba ufuna ukuphumelela kwaye wenze umfazi athandane nawe, phuhlisa indlela yokuba equka zonke ezi mpawu kubuntu bakho. Siyakuqinisekisa ukuba umfazi wamaphupha akho akayi kuba nako ukumelana nokuba nomhla kunye nawe kwaye, ngethemba, ukuba konke ecaleni kwakho.
Ukuba ufuna ukuqhubeka nokwandisa ulwazi lwakho, tyelela amanye amanqaku e fumanisa.online